IBC2019 တွင် Cloud မီဒီယာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အသစ်ဖွင့်လှစ်သော OTT ပလက်ဖောင်းအားထုတ်ဖော်ပြသမည့် Insys Video Technologies | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Insys ဗီဒီယို Technologies က IBC2019 မှာနယူးတိမ်တိုက်မီဒီယာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြေရှင်းချက်နဲ့ Expanded OTT ပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်ဖို့
ကုမ္ပဏီပြပွဲမှာ dual-မျက်မှောက်၌အသစ်နှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖြေရှင်းချက်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံပြပွဲခွံပေါင်းအမေဇုံက Web Services ကရပ်တည်ချက်မှာဆန္ဒပြပွဲများ
သြဂုတ်လ 22, 2019 - Dübendorf, ဆွစ်ဇာလန်: over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ဗွီဒီယိုကိုဖြေရှင်းချက်တီထွင် Insys ဗီဒီယို Technologies က အစွမ်းထက်အသစ်က cloud အခြေခံ video recording ကိုဖြေရှင်းနည်းနှင့် Two-pronged ပြပွဲမဟာဗျူဟာနှင့်အတူစက်တင်ဘာလအတွင်းအမ်စတာဒမ်အတွက် IBC2019 ပြပွဲမှဦးတည်နေပါတယ်။ (IBC ခန်းမ 03 နှင့်7အကြားနေသောလူသွားလမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်) ခွံ P8 အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သီးခြားရှိနေခြင်းအပြင်, ကုမ္ပဏီ (5.C80) ရပ်ဟာ AWS မှာဆန္ဒပြပွဲများအတွင်းအမေဇုံက Web Services က (AWS) နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။
IBC2019 မှာယင်း၏ကမ္ဘာကြီးပွဲဦးထွက်အောင်ကျယ်ပြန့် applications များနှင့်စျေးကွက်သို့စီးပွားဖြစ် OTT မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုကျော်လွန်ပြီး Insys '' ဟာယယဇ်ပူဇော်၏နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်ထားတဲ့သစ်ကို Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder, ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစိုးရများအဖြစ်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အများပြည်သူကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်းများပစ်မှတ်ထား, cloud-based Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder ကိုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယို streams မှတ်တမ်းတင်ဖို့ဖောက်သည်ကို enable ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်; စတိုးဆိုင်, ထိုအသံသွင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စာရငျး; အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာကြည့်ရှုချင်နှင့်အကြောင်းအရာထွက်ကစား။
Insys '' လုပ်ငန်း-class ကို OTT ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းကနေသက်သေနည်းပညာပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်း, elastic Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder ကိုမဆိုတိုက်ရိုက်-stream ကိုသိမ်းဆည်းလိုအပ်ချက်များကိုကောင်းစွာသင့်လျော်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ထိုကဲ့သို့သောပါလီမန်ညီလာခံအစည်းအဝေးများ, ညီလာခံအစည်းအဝေးများနှင့်တက္ကသိုလ်ပို့ချချက်အဖြစ်အကြောင်းအရာမှတ်တမ်းတင်ဘို့အထူးသဖြင့်စံပြ။ On-demand ကလစ်ပ်ထွက်ရှိကို formats တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သောအနေဖြင့်တိုက်ရိုက်စီးနှင့်အသံသွင်းထားတဲ့ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတဆင့်အွန်လိုင်းကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားအဓိက features တွေကိုအသံသွင်းခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်အသံကူးယူ၏ကြိုတင်အချိန်ဇယားဆွဲပါဝင်သည်။
Insys လည်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများအလွယ်တကူစီမံခန့်ခွဲငွေရရှိအောင်, ဖြန့်ဝေခြင်း, branded full-featured ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ apps များမှတဆင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာမြှင့်တင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အဖြူရောင်-တံဆိပ် OTT ဖြေရှင်းချက်အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။ InsysGO Insys OneChannel လိုင်းများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့တစ််ကြည့်ရှုသူအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကယ်တင်စဉ် MVPDs နှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး, 30 ရက်ပေါင်းသကဲ့သို့နည်းနည်းအများအပြားလိုင်းများ spanning ဆွဲဆောင်မှု OTT ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, Insys VoD အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးအလွယ်တကူ On-demand Device ရဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးကြည့်ရှုဘို့မိမိတို့ဗီဒီယိုကိုစာကြည့်တိုက်ပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းပို့လိုက်ကြတယ်, AWS မီဒီယာန်ဆောင်မှုများကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်လွယ်ကူအောင်အပြည့်အဝ-managed န်ဆောင်မှုများ၏မိသားစုနှင့်အတူ Insys '' API ကိုပေါင်းစည်းမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ ပြင်ဆင်. , လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ဗီဒီယိုကိုမကယ်မလွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ Insys ဖြေရှင်းချက်ဟာ AWS ဒြပ်စင် MediaLive ထုတ်လွှင့်တန်းတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစည်းမှု feature; ထုတ်လွှင့်တန်း features တွေနှင့်အတူ AWS ဒြပ်စင် MediaConvert ဖိုင်-based ကိုဗီဒီယို transcoding ဝန်ဆောင်မှု; တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုများအတွက် AWS ဒြပ်စင် MediaConnect အရည်အသွေးမြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု; နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြင်ဆင်နှင့်အင်တာနက်ကျော်ပို့ဆောင်မှုအတွက်ဗီဒီယိုကိုကာကွယ်ပေးသည်သော AWS ဒြပ်စင် MediaPackage ဝန်ဆောင်မှု။
Insys ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းအမေဇုံ Rekognition ဗီဒီယို, လှုပ်ရှားမှုများကို detect မယ့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု-powered ဗီဒီယိုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း; ဘောင်အတွင်းကလူများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုနားလည်; နှင့်လူများ, အရာဝတ္ထု, နာမည်ကြီးတွေနှင့်မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ OTT ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သော်ဗလာနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအဖြစ်ကြည့်ရှုသူ-အထိခိုက်မခံသောအကြောင်းအရာများကိုထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်မှုန်ဝါးနိုင်ပါတယ်စဉ် Insys '' OTT ပလက်ဖောင်းနှင့် Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder ကိုအလိုအလျောက်ထိုကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာအတွင်းမှာနာမည်ကြီးတွေနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ်ကလူကိုသိရှိနိုင်ဖို့အမေဇုံ Rekognition ဗီဒီယိုနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစည်းမှုကိုသုံးပါ ။ ဤအတောအတွင်း Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder အတွက်အသံကူးယူ feature ကိုအလိုအလျောက်မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှုဝန်ဆောင်မှု Transcribe အမေဇုံနှင့်အတူ API ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် powered ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ OTT ဝန်ဆောင်မှုပေးဘို့ငါတို့ကျော်ကြားတဲ့ဖြေရှင်းချက်များ၏စွမ်းရည်များချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်နေချိန်မှာကျနော်တို့ Insys တိမ်တိုက်ဗီဒီယို Recorder ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူဖောက်သည်တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေပြနည်းပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟု Insys CEO ဖြစ်သူ Krzysztof Bartkowski ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့က IBC တက်ရောက်ရန်နှင့်ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း AWS နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆက်ဆံရေးမျိုးပြ၎င်းတို့၏ရပ်တည်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဆက်ဖို့မျှော်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။ "
IBC မှာ Insys နှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုအချိန်စာရင်းလိုသောဧည့်သည်များအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်ဒါလုပျနိုငျ [အီးမေးလျ protected].
Insys ဗီဒီယို Technologies က GmbH သည်အကြောင်း - Insys ဗီဒီယို Technologies က (www.insysvt.com) ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှတဆင့်မဟာဗျူဟာနှင့်ဒီဇိုင်းထံမှ OTT စီမံကိန်းများပြည့်စုံအကောင်အထည်ဖော်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ဥရောပမှာရှိတဲ့အမြန်ဆုံး-ဖွံ့ဖြိုးဆဲကဗီဒီယိုပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်, Insys များအတွက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် ဂြိုဟ်တု ပံ့ပိုးပေး, ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ, ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံဖြန့်ဖြူး။ ထက်ပိုလေးသန်းစားသုံးသူ Insys ဖြေရှင်းချက်စွမ်းအားဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Magewell သည် 4K M.2 Capture Card ကို Quad-Link နှင့် 3G-SDI ဆက်သွယ်မှုဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 22, 2020
AI အမေဇုံက Web Services က ဉာဏ်ရည်တု AWS ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ မိုဃ်းတိမ်ကို ပို့ခြင်း ဒြပ်စင် insys ဗီဒီယိုကိုနည်းပညာများကို insys + LIVE စက်သင်ယူ ML ဝယ်လိုအားအပေါ် OTT ပလက်ဖောင်း လွှ ဗီဒီယို vod 2019-08-22
ယခင်: မြက်ချိုင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Solutions Expert'ease အဆိုပါ Edge Give
နောက်တစ်ခု: alpha မျက်လုံးအသေးစားကင်မရာထဲမှာ optical image ကိုပုံပျက်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်